Submitted by mcpa on Fri, 01/20/2017 - 20:25
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း၏ (၂၀၁၇ − ၂၀၁၉) ခုနှစ် အမှုဆောင်သက်တမ်း အတွက် အလုပ်အမှုဆောင်ရွေးကောက်ပွဲကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၀) ရက်၊ သောကြာနေ့ နံနက် (၉း၀၀) နာရီတွင် အခန်း (၂၀၅)၊ ပင်မဆောင် ၊ MICT Park ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ရွေးချယ်ခံရသော အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့၏ အမည်စာရင်းနှင့် ရာထူးအား ထုတ်ပြန်ကြေညာ အပ်ပါသည်။
Read more about မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း၏ (၂၀၁၇ − ၂၀၁၉) ခုနှစ် အမှုဆောင်သက်တမ်း အတွက်အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့၏ အမည်စာရင်းနှင့် ရာထူးအား ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း
Submitted by mcpa on Thu, 01/05/2017 - 17:48
(ကြာသပတေးနေ့) နံနက် (၁၀း၀၀ မှ​ ၁၂း၀၀) နာရီအထိ ရန်ကုန်မြို့၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ MICT Park၊ အခန်း(၂၀၅) တွင် Director of Programs & International Empowerment Career Coach / Trainer Phil WIN (MAITD, MACPI) မှ “Winning Ways to your Success” ခေါင်းစဥ်နှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးဟောပြောမည် ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါ ဟောပြောပွဲ၌ အောက်ပါ အကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးဟောပြောပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
1.5Key Secrets to your successful career
2. Winning Formula for your better life
3.7Winning Ways to your success
4. Install6High Performers habits.
5. Build Winning confidence
6. Set your Goals & become reality
ဟောပြောပွဲသို့ တက်ရောက်ခြင်းအားဖြင့် မိမိတို့၏ နေ့စဉ်ဘဝတွင် အောင်မြင်မှုနည်းလမ်းများကို ရရှိနိင်ပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဘဝသစ်သို့ ရောက်ရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ မိမိကိုယ်မိမိ တန်ဖိုးထားနိုင်၍ နေ့စဉ် လုပ်ငန်းခွင်တွင် ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ပြီး မိမိတို့ဘဝပန်းတိုင်ကို အောင်မြင်စွာ ရောက်ရှိနိုင်မည့် ဘဝနေနည်း ဗျူဟာများကို လေ့လာသိရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါ ဟောပြောပွဲသို့ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းဝင်များနှင့် စိတ်ပါဝင်စားသူ မည်သူမဆို (အခမဲ့) တက်ရောက် ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း ရုံးခန်း၊ အဆောင် (၉)၊ မြေညီထပ်၊ MICT Park၊ ဖုန်း − ၆၅၂၂၇၆၊ ၀၉−၇၃၀၈၈၃၀၀ သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်း စုံစမ်းနိုင် ပါသည်။
(မှတ်ချက် − လူဦးရေ(၁၀၀) ဦး ကန့်သတ်ထားပါသဖြင့် တက်ရောက်လိုသူများအနေဖြင့် အသင်းရုံး ဖုန်း (သို့) email – yrcpaoffice@gmail.com သို့ ကြိုတင်စာရင်းပေးသွင်းရပါမည်။)
Read more about ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း “Winning Ways to your Success” ဟောပြောပွဲကျင်းပမည်
Submitted by mcpa on Thu, 12/22/2016 - 16:59
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း၏ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော အလုပ်အမှုဆောင် ရွေးကောက်ပွဲတွင် အသင်းသားများမှ မဲပေး၍ ရွေးချယ်ခံရသော (၂၀၁၆ − ၂၀၁၈) ခုနှစ် အမှုဆောင်သက်တမ်းအတွက် အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သစ်၏ အမည်စာရင်းနှင့် ရာထူးအား ထုတ်ပြန်ကြေညာ အပ်ပါသည်။
Read more about ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း၏ (၂၀၁၆ − ၂၀၁၈) ခုနှစ် အမှုဆောင်သက်တမ်းအတွက် အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သစ်၏ အမည်စာရင်းနှင့် ရာထူးအား ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း
Submitted by mcpa on Mon, 12/19/2016 - 15:28
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း၏ ၂၀၁၆ − ၂၀၁၈ အလုပ်အမှုဆောင်သက်တမ်းအတွက် Register to Vote ပြုလုပ်ထားသော အသင်းသားများက Online Voting နည်းလမ်းဖြင့် mcpa.pro တွင် Profile များအား ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာ၍ မဲပေးနိုင်ပါပြီ။
Read more about ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း၏၂၀၁၆ − ၂၀၁၈ အလုပ်အမှုဆောင်သက်တမ်းအတွက် mcpa.pro တွင် Profile များအား ဝင်ရောက်လေ့လာကြည့်ရှုပြီး မဲပေးနိင်
Submitted by mcpa on Sat, 12/17/2016 - 18:28
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှ ကြီးမှူးကျင်းပသည့် 6th Developer Conference 2016 Yangon ကို ယနေ့နံနက် (၉း၃၀) တွင် Conference Hall, Main Building, MICT Park ၌ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
Read more about MCPA Developer Conference 2016 Yangon ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း
Submitted by zwintun on Mon, 12/05/2016 - 15:00
MCPA EC Election 2016-2018 ပွဲ အတွက် အသင်းဝင် member များ မဲပေးနိုင်ရန် အတွက် www.mcpamyanmar.org မှတဆင့် မဲပေးရန် လည်ကောင်း www.mcpa.pro မှ လည်ကောင်း သတ်မှတ် ထား သည့် နေရက် များ အလိုက် အချိန်မှီ Register ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်.။
Register ပြုလုပ်ပြီး သော member များအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ MCPA တိုင်းဒေသ ကြီး မှ EC ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်အလောင်းလျာ များကို မဲပေးနိုင် ကြောင်း နှင့် သက်ဆိုင်ရာ မဲပေးနိုင်သည့် နေ့ရက်များ အချိန်များ ကို အသင်း website www.mcpamyanmar.org တွင် လည်ကောင်း အသင်းဝင် member သိရှိနိင်ရန် မဲပေးနိုင်ရန် အတွက် MCPA EC အလောင်းအလျာ များ ၏ BI0/Profile page များကို အသင်း website တွင် အချိန်နှင့် တပြေးညီ ကြည့် ရူနိုင်ပါသည်။
MCPA EC Election အတွက် တစုံတစ်ရာသိလိုပါကအသင်း၏သတင်း ပြန်ကြားရေးကော်မတီကို လည်းကောင်း အသင်း
ရုံး ခန်း သို့လည်းကောင်း လူ ကိုယ်တိုင် ဖြစ်စေ ဖုန်း နံပါတ် +95-1-652276, +95-9-73088300 သို့ဖြစ်စေ စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Read more about MCPA EC Election 2016-2018 အတွက် အသင်းဝင် များ မဲပေးကြပါစို.
Submitted by mcpa on Wed, 11/23/2016 - 11:38
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းနှင့် infinity Information Development (iID) တို့မှ ကြီးမှုး၍ IT (Infrastructure) ပိုင်းဆိုင်ရာ Microsoft Windows Server Basics သင်တန်းကို ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၁၀) ရက် နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
သင်တန်းကို Microsoft Windows Server အကြောင်း စိတ်ဝင်စားသူ မည်သူမဆို တက်ရောက်နိုင် ပါသည်။
သင်တန်းပြီးဆုံးပါက Microsoft Windows Server ကို အခြေခံသိရှိနားလည်ပြီး Server တစ်လုံး၏ လုပ်ငန်း ဆောင်တာများကို သိရှိသွားမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ အခေါ်အဝေါ်များနှင့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင် မရှိမဖြစ် လိုအပ်သော Windows Server Services များကို စနစ်တကျ သိရှိနားလည်ပြီး အသုံးချနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Course တွင် ပါဝင်မည့် အကြောင်းအရာများမှာ −
• Network Operating System Basic
• Microsoft Windows Network
• File / Folder Permission
• Dynamic Host Controller Protocol
• IIS Local Web Server
• Basic Active Directory Domain Service
သင်တန်းကာလ - ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၀) ရက်မှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၈) ရက်အထိ
သင်တန်းအချိန် - နေ့လယ် ၀၁းဝဝ နာရီ မှ ညနေ ၀၅းဝဝ နာရီအထိ
စုစုပေါင်းနာရီ - ၃၀ နာရီ
သင်တန်းကြေး - ၄၀,၀၀၀ိ/ ( လေးသောင်းကျပ်တိတိ)
- ၂၀,၀၀၀ (နှစ်သောင်းကျပ်တိတိ) MCPA Member (50% Discount)
သင်တန်းသားဦးရေ - (၂၅) ဦး
သင်တန်းဆရာ - ဦးဉာဏ်လင်းထက်
သင်တန်းနေရာ - အဆောင် (၉)၊ မြေညီထပ်၊ MCPA ICT Lab၊ MICT Park၊ လှိုင်မြို့နယ်။
သင်တန်းတက်ရောက်လိုသူများအနေဖြင့်၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၈) ရက် ညနေ (၄) နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ MCPA ရုံးခန်းသို့ လာရောက်စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါ က မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင် အသင်းရုံးခန်း၊ အဆောင်(၉)၊ မြေညီထပ် ၊ ဖုန်းနံပါတ် - ၆၅၂၂၇၆၊ ၀၉-၇၃၀၈၈၃၀၀သို့ စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
(မှတ်ချက်။ သင်တန်းတက်ရောက်သူများအနေနှင့် မိမိ၏ကိုယ်ပိုင် Notebook (သို့) Laptop ကို ယူဆောင်လာရပါမည်။ အတန်းတက်ချိန် ၇၅ % မပြည့်ပါကသင်တန်းဆင်းလက်မှတ် ပေးအပ်မည် မဟုတ်ပါ။)
Read more about "Windows Server Basics Short Course" အမှတ်စဉ် (၁) သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည်
"Hardware (A+) and System Troubleshooting" အမှတ်စဉ် (၃) သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည်
Submitted by mcpa on Wed, 11/23/2016 - 11:37
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှ ကြီးမှုး၍ Hardware (A+) and System Troubleshooting နည်းပညာရပ်များကို စိတ်ဝင်စားသော မြန်မာအိုင်တီလူငယ်များ၊ Hardware အား အခြေခံကျကျ သိရှိလိုသော လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရောက် Technician များ၊ MCPA Member များအတွက် သင်တန်းကို ၂၀၁၆ ခုနှစ် ၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၀) ရက်နေ့မှစ၍ နည်းပညာ အထောက်အကူပြုစေရန် ရည်ရွယ်၍ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားမည် ဖြစ်ပါသည်။
ယနေ့ IT Environment တွင် ကျွမ်းကျင်သော Hardware Engineer များ ပေါ်ထွက်လာရေးနှင့် System ပိုင်းကို ထဲထဲဝင်ဝင် ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်သော IT Technician များ ပေါ်ထွက်လာရေးအတွက် ရည်ရွယ်၍ ဖွင့်လှစ်ရခြင်း ဖြစ်သည်။
ဤသင်တန်းအား အခြေခံကွန်ပျူတာအသုံးပြုတတ်သူများနှင့် Hardware ပိုင်းကို အခြေခံပိုင်နိုင်လိုသူများ တက်ရောက်နိုင်ပြီး၊ သင်တန်းတက်ရောက်ခြင်းအားဖြင့် Hardware ပိုင်းကို အခြေခံကျနစွာ ကျွမ်းကျင်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး၊ သင်တန်းပြီးဆုံးပါက Hardware Engineer တစ်ယောက်အဖြစ် လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရောက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Content Overview – “ံHardware (A+) and System Troubleshooting”
• Introduction to Computer System
• Essential Hardware Components
• Installation and Configuration Microsoft Windows OS
• Device Drivers & Third party application
• System Tweaking with Group Policy
• Mastering System with Registry
• Command Line Usage
• Linux OS Installation
• Linux application package management
• Fundamental Reverse Engineering
• Workgroup Level Setup
• Bonus အနေဖြင့် Keylogger (Hardware) & Wi-Fi Hacking
သင်တန်းကာလ - ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၀) ရက် မှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၅) ရက်အထိ
သင်တန်းအချိန် - နံနက် ၀၉းဝဝ နာရီ မှ ၁၁းဝဝ နာရီအထိ
သင်တန်းကြေး - ၂၀၀,၀၀၀ိ/ ( နှစ်သိန်းကျပ်တိတိ)
MCPA Member (50%) - ၁၀၀,၀၀၀ (တစ်သိန်းကျပ်တိတိ)
သင်တန်းဆရာ - ဦးရဲမျိုးသူ
သင်တန်းသားဦးရေ - (၁၅) ဦး
သင်တန်းတက်ရောက်လိုသူများအနေဖြင့်၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၉) ရက် ညနေ (၄) နာရီ နောက်ဆုံး ထား၍ MCPA ရုံးခန်းသို့ လာရောက်စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာ ပညာရှင်အသင်း ရုံးခန်း၊ အဆောင်(၉)၊ မြေညီထပ် ၊ ဖုန်းနံပါတ် - ၆၅၂၂၇၆၊ ၀၉-၇၃၀၈၈၃၀၀ သို့ စုံစမ်းမေးမြန်း နိုင်ပါသည်။
(မှတ်ချက်။ အတန်းတက်ချိန်ရ၅ % မပြည့်ပါကသင်တန်းဆင်းလက်မှတ်ပေးအပ်မည်မဟုတ်ပါ။)
Read more about "Hardware (A+) and System Troubleshooting" အမှတ်စဉ် (၃) သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည်
MCPA ICT နည်းပညာ ပညာပေး ဟောပြောဆွေးနွေးခဲ့ခြင်း
Submitted by mcpa on Tue, 11/22/2016 - 14:50
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း (YRCPA) ၏ ပညာရေးကော်မတီမှ ကြီးမှူး၍ Visa Inc., ၏ ကူညီပံ့ပိုးမှုဖြင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်းများတွင် တိုးတက်လာသော ICT နည်းပညာရပ်များအကြောင်း သိရှိနားလည် နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်၍ MCPA ICT နည်းပညာ ပညာပေး ဟောပြောပွဲကို
အ.ထ.က (၃) မြောက်ဥက္ကလာ​ကျောင်းသို့ (၂၂-၁၁-၂၀၁၆) ရက်နေ့၌ သွားရောက်ဟောပြောခဲ့ရာ မြောက်ဥက္ကလာ ပညာရေးမှူးရုံးမှ တာဝန်ရှိသူ (၁) ဦးက အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားပြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကွန်ပျူတာ ပညာရှင်အသင်း အတွင်းရေးမှူး ဦးအောင်စိုးမိုး နှင့် ပြန်ကြားရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းထွန်း တို့က ICT နှင့် ပတ်သက်သည့် နည်းပညာရပ်များနှင့် အသုံးချမှုများ၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများအကြောင်းကို နံနက် (၉) နာရီမှ (၁၁) နာရီအထိ ဟောပြောဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
Read more about MCPA ICT နည်းပညာ ပညာပေး ဟောပြောဆွေးနွေးခဲ့ခြင်း
Certification in IT Project Management Exam ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း
Submitted by mcpa on Tue, 11/22/2016 - 14:35
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း (MCPA) နှင့် စင်ကာပူနိုင်ငံ Singapore Computer Society (SCS) တို့ ပူးပေါင်းကျင်းပ ပြုလုပ်သည့် Certification in IT Project Management Exam ကို MICT Park, Main Building တွင် ကျင်းပခဲ့ရာ မြန်မာနိုင်ငံမှ (၁၆) ဦး ဝင်ရောက်ဖြေဆို ခဲ့ကြပါသည်။
Read more about Certification in IT Project Management Exam ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း